musha nyika dzakabatana WWE Superstars Sasha Banks Bhuku Rehuduku Hwezve Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican wrestler weruzhinji nezita rekudana “Shefu". Nhoroondo Yedu Sasha Banks Nhau yehuduku pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva hwemoto wake wakasimba asi wrestling yakabudirira inofamba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Sasha Banks 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Sasha Banks (christened Mercedes Kaestner-Varnado) akaberekwa musi we 26th waJanuary 1992 pa Fairfield muCalifornia, USA Iye ndiye aiva wekutanga kuvana vaviri vakazvarwa naamai vake Judith Varnado uye kuna baba vake Reo Varnado.
Sasha Banks Vabereki - Reo naJudith Varnado. Credits: Youtube uye Iyo Sportster.
Rudzi rweAmerica rweAfro American dzinza nemidzi yeGerman yaive ichiri mudiki kwazvo baba vake pavakasiya mhuri. Nekudaro, iye aive asina-ruoko akasimudzwa naamai vake avo vakaita nepese pavaigona napo kumutarisira iye uye nemunin'ina wake autistic munin'ina.
Baba veBabhanki vakasiya mhuri iyo paakanga achiri muduku zvikuru. Credits: WWE.
Mabhanki akakurira uye aiva nehutano hwehuduku mumaguta mazhinji nekuda kwekuti mhuri yake yaigara ichienda pakutsvaga nzvimbo dzakanaka dzekuchengetedza utano uye zvikoro zvehama yake autistic.
Sasha Banks akakurira mumaguta akawanda pamwe nehama yake autistic. Credits: WWE.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Kukura mumaguta anosanganisira Iowa, Minnesota neMassachusetts, Young Banks aiva mutsigiri wechirwere aida kuratidzira mutambo paTV uye ane tarisiro yekuve ari kurwisana pane imwe nguva mune ramangwana. Muchiedza chakafanana, mabhandi akashandura nharo dzenharo panguva iyo kusanganisira Chris Jerico naEddie Guerrero kusvika pakuvhiringidzika kwaamai vake avo vaida kuti chikwata chekurwisana chive nezvinhu zvinowirirana nekunamatira kwechitendero.
"Ndinoyeuka amai vangu vachipinda uye vachiita senge, 'Muri kuitei, chii chamuri kuona?' Mwari havadi zvinhu izvi! Bvisa izvozvo! ' Uye ndaive ndakafanana, 'ok.' Saka ndakaidzima ndichibva ndamhanya mukamuri yemunin'ina wangu uye ini ndakaibatidza zvakare ndikaramba ndichingoitarisa ”. Akayeuka mune podcast - Kuita Nzira Yadzo Yokurumbidza naLilian Garcia.
Sasha Banks akarerwa naamai vake nenzira yechitendero. Credits: Imgur.
Taura zvimwe zvekurerwa nechitendero kweBhangi, musikana mudiki naamai vake vaiwanzoenda kuchechi kashanu pavhiki kusvika iye apanduka zvishoma nezvishoma kudzikamisa huwandu hwenguva dzaakaratidzira kumabasa echitendero.
“Ndakanga ndisati ndatanga kuita mutsimba apo ndaive ndakafanana, 'Amai, handigoni kuenda kuchechi musi weMugovera neChishanu. Ini ndinogona kuenda nemusi weSvondo, asi ndine mitambo yewrestling. '” Akati Banks munguva yehurukuro neUnfiltered. Yakanga iri nyaya yemakore mabhanki asati awana mai vake kuti vatsigire zvaanoda uye basa rake mukurwa pashure pokunge apedza dzidzo yake.
Braun Strowman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Mabhangi haana kudzidza mukati memadziro mana ekirasi pachikoro chinoshamisira asi aive nezvidzidzo online. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti mhuri yake yaigara ichifamba kudzamara vazogara muBoston, Massachusetts. Paive paBoston apo maBhangi akatanga basa rake rekuvaka mukurwira nekuchengetedza kunyoresa mumusasa wewrestling. Iye akabva atanga rwendo rwake kuenda mukurumbira nekubatana kwakazvimirira kukwikwidza kukwidziridzwa.
Kutanga pakati pekusimudzira kwakadai kwaive Chaotic Wrestling (CW), yakavakirwa muWoburn, Massachusetts. Ndichiri mukusimudzirwa, Mabhangi akamutangisa kutanga musi wa1 Gumiguru 2010 aine zita reringi Mercedes KV uye seye tag tag naye kuna Nikki Roxx. Ivo vakakundwa zvakadaro naLexxis naDanny E. KV. Kuonekwa kwakatevera akaona Mabhangi akarasikirwa nemutambo wake wekutanga naDanny E. uye mwedzi yakati gare gare, akakunda Alexxis kunotora Chaotic Wrestling Women's Championship, zita raakachengetera kwenguva refu kwazvo munhoroondo yemakwikwi.
Sasha Banks akabata zita reChatic Wrestling kusvikira asvika kuWWE mu2012. Credits: Chaotic Wrestling uye Amino Apps.
Mabhanki panguva imwechete (yose pakati peC2010-2012) yakaita matanho makuru mune imwe kukurudzirwa inozivikanwa seNew England Championship Wrestling (NECW) nokurasikirwa chete chete pakati pemitambo yakawanda. Izvozvowo zvakanyorerwawo mune rimwe sangano rekugadzirisa sangano rinonzi National Wrestling Alliance (NWA) apo yairwisana pasi pezita rechitambo Miss Mercedes.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Iyo 18th yaAugust 2012 yaive zuva iro Mabhangi akasaina chibvumirano neWWE uye akaendeswa kunharaunda yayo yeNXT yekuvandudza. Ndichiri kuNXT, Mabhangi akatora zita remudariro "Sasha Banks" uye akarova kukunda kwake kwekutanga paterevhizheni nekukunda Alicia Fox muna Ndira 2013.
Iye akazotevera kuita akawanda singles uye timu kurwa kudzamara ave NXT Vakadzi Mhare nekukunda Charlotte munaFebruary 2015. Kwapera gore, Mabhangi akabvisa Charlotte bhandi rakakura kwazvo; iyo WWE Women's Championship zita.
Roma Inotonga Ucheche Nyaya Plus Untold Biography Facts
Iyo nguva Sasha Banks akasimudza WWE Women's Championship Chinyorwa kekutanga.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Mabhangi mudzimai anoroorwa. Tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pekufambidzana kwake nhoroondo kusanganisira kuti akasangana sei uye akaroora murume wake, Sarath Ton anozivikanwawo seMid Mikaze. Kutanga, hakuna marekhodi ehukama hweSasha Banks hwakapfuura. Kunyanya zvakadaro, akabvuma kuti kuchengeta mai vake nehanzvadzi yavo yakawana nguva yakawanda yakawanda uye havana kusiya nzvimbo yepamukati yemanzwiro.
Wrestler akazopedzisira awana rudo paakasangana nemurume wake kuti ave uye aimbove mutsimba, Sarath Ton padunhu rakazvimiririra rewrestling kwavakashanda vese. Zvakawanda rudo rwaTon rweMabhangi zvekuti akatamira kuTampa Florida naye mushure mekunge asainirwa kuWWE mu2012.
Sasha Banks anga ari muhukama nemurume wake Sarath Ton kubvira 2011.
Yaiva kuFlorida kuti Ton yakagadzika semuchengeti wezvigadzirwa zvemhando dzakawanda dzenyeredzi dzeWWE isati dzapiwa basa renguva yakazara seWWE costume designer. Mabhandi neTai vakachengetedza ukama hwavo kupfuura huwandu hwemashoko ehutano uye muchiedza chimwechete, vakaroorana muchivande muna August 2016. Hakuna mwana akaberekwa nemuchato sezvo vakaroorana vari kunyanya kufunga nezvekudzika midzi yavo muWWE.
Sasha Banks naSarath Ton vakaroora muchivande mu2016.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Sasha Banks akaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvehupenyu hwemhuri uye hama dzake.
Nezve baba vaSasha Banks: Mabhangi baba hapana mumwe munhu asi Reo Varnado. Baba vewrestler vanoimba mumakirabhu ehusiku, vane yavo yekudyira inonzi Reo Ribs ine mashoma maficha ekuonekwa kuchikwereti chake. Kunyangwe zvakadaro, ndiye munhu wekupedzisira Bhangi angade kutaura nezvake. Muchokwadi, iye anomutora saiye "baba vake vekumubereka", izwi rinoshandiswa nevanhu kumubvumidza kana baba vokurera. Nei hasha dzakanyanya kudaro?.
Sasha Banks baba Reo vane yavo yekudyira uye vanoita mimhanzi padivi.
Izvi zvinonyanya nekuti Reo anga asiri baba vakanaka. Aive pano neapo mukati nekubuda muhupenyu hweMabhangi, aishungurudza amai vake, aisateedzera vana vake uye kuzvitora zvese, aisabhadhara rubatsiro rwemwana pakurerwa kweMabhangi nemunin'ina wake. Padivi rakajeka, ivo babamunini kune rapper Snoop Imbwa yaanogovera hukama hwepedyo naye.
Nezve amai vaSasha Banks: Judith Varnado ndiMai Banks amai uye yavo yekutanga yakanaka pesheni inozivikanwa nekumurera nenzira yechitendero. Judith pakutanga aisada kuti Mabhangi ave mutsimba asi akange asina sarudzo asi kumutsigira nekuda kwekuomerwa kwaakatarisana nako panguva iyoyo. Iye achiri kuchengetedza hukama hwepedyo neMabhangi uye ndomumwe wevateveri vake vakuru.
Amai vemabhangi Judith ane makore apfuura akura kuita fan yake huru.
NezveSasha Banks hama: Mabhangi chete mukoma munin'ina wake autistic uyo akakurira kuva akanaka nekuda kwekurapwa kwakaringana uye rudo kubva kune wewrestler naamai vake. Mabhangi angadai akashuvirawo hanzvadzi yechidiki zvakare asi nerudo akagarira izvo zvakapihwa. Zvichakadaro, hapana kutonga kunze kwekuti hama dzeMabhangi dzinogona kukurumidza kumuita kuti ave tete vanopihwa kutaridzika kwake kwakanaka uye hunhu hwakazvibata hunomuita anokwezva kune vanhukadzi.
Sasha nemukoma wake vanga vari vaviri vasingaparadzanisike kubva paudiki.
NezveSash Banks vakaroorana: Mabhangi zvakare ane hama dzinoverengeka dzakakurumbira dzinosanganisira Snoop Imbwa naBrandy Norwood kubva kudivi rababa vake. Wakawedzerwa kune zvakanyorwa ndiRay J naDaz Dillinger.
Snoop Imbwa ndomumwe wevanin'ina vaSasha Banks 'vakakurumbira.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Takawana mufananidzo wakajeka weSasha Banks rag kuhupfumi nyaya inosanganisira rudo rwake uye hupenyu hwemhuri, zvinova zvakakosha kuva nechokwadi pamusoro peBhangi.
Akatumidzwa zita "Bhosi", Sasha Banks haagari achibuda munzira yake kuti awane shamwari asi anochengetedza hukama hwepedyo nevaya vaanavo. Mabhangi anotendawo kuti kusava neudyire kwakakosha uye kushivirira inzira yakakosha yekubudirira.
Kubva pane zvaanotenda uye zvinyorwa Mabhanki ndiye anotsigira zvakasimba vakadzi vane mano uye haamboregi kuomesa kuti vakadzi vanogona kufamba zvakanaka kana vakapa mapurisa kuti vaite savanhurume vavo.
Kunze kwehupenyu hwake hwehunyanzvi, Mabhangi ane zvido mumimhanzi yechiJapan pop uye ari fan mukuru weanime nemakatuni. Iye zvakare anofarira kupfeka sevanhu kubva kumafirimu ake aanofarira, mitambo yemavhidhiyo uye zvinoratidzwa paTV.
Kuzvivaraidza kumabhangi kunosanganisira kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuona mabhaisikopo uye kupfeka sevanhu vaanofarira.
Sasha Banks Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Mune dzimwe nhepfenyuro, mabhangi anooneka pamitambo yemavhidhiyo eWWE; WWE 2K17; WWE 2K18 uye WWE 2K19. Anowanikwawo mumitambo yemasasa; WWE Mayhem uye WWE SuperCard.
Mabhandi muzvigaro zvemhete zvakagadzirwa nemumwe muumbiki kupfuura murume wake Sarath Ton. "Akafanana nemafanistista. Anoita zvose. Ini ndinongosarudza iyo mavara. " Iye akazarura munguva yehurukuro ne The Project.
Sasha Banks murume anomugadzirira chipfeko.
Chikwata chemimhanzi cheAmerica chinozivikanwa seGomo reMbudzi chakanyora ndokuita "Rwiyo rweSasha Banks". Iyo track iyo yakaburitswa munaJune 2018 inotsanangudza hudiki hweBhangi kubva pakuve fan chaiye wewrestling kune "Legit Boss" mumutambo.
Yakawedzerwa kuve "Legit Boss", Sasha anga ari trailblazer mubhizimusi rewrestling bhizimusi nekurwa mu; kutanga nguva dzose Iron Man Match (Gumiguru 2015); iwo ekutanga vakadzi vachikwikwidza kuMiddle East (Zvita 2017); kutanga kwevakadzi Royal Rumble Match (Ndira 2018); kutanga-kwevakadzi Kupedza Chamber Mutambo (Kukadzi 2018) pamwe neGehena rekutanga remadzimai muSero mechi.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Sasha Banks Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!